Southbank, UK I was walking down Southbank last night between river Thames and Southbank center. There isakind of entertainment area. I have been wandering up and down the street since 10pm after getting dumped by my girlfriend. I just wanted to drunk and talk to someone forawhile.
I was so drunk and I am looking foratype of face. The facial type like my girlfriend had. She was from Asian country, coastal region where girls have thin lips, small light dark eyes, high cheekbone, olive skin, big feet, tall and dark hair. Girls from my girlfriend area are very oriental. But to me, they are beauty incarnate, graceful, extra ordinary, glamour, exotic, gorgeous, glamourous and divine. Just like my girlfriend who broke my heart. recently. I kept thinking about her , I could have many girls at my work place who interested me before I met my girlfriend but no one I see can compare to her beauty and I loved her so much.
It was nearly midnight and the shops are closed. I sawasmile fromastreet side near the tree. At the time, I thought it's her - my girlfriend. I approached her and everything is the same her light dark eyes, her thin lips and her smile. A single difference is there isashort hair cut on her head.
I walked to her and greeted . She smiled and sat next to me on the wooden bench. I stroked her cheek and it was really icy cool . I talked to her, she was laughing at my silly jokes. Was so astonished because the way she laughed was exactly the same as my girlfriend. She rested her head on my shoulder.
There were2policemen. They were staring at me. I looked back and told them "What's up officer?".
They looked at each other and said. "R u ok?"
Then they came up to me and asked whether I can manage or not. I told them
"I am fine, I am fine, but this young lady needs to catch the train. I don't think I can walk her. I amabit drunk and dizzy. Can you help her to reach the station safe?
"Who?" one of the policeman asked. "I was getting so upset, but in England you have to remain clam . I speak slowly so they can clearly understand,
"The lady ~next~ to me. Sir"
He signed and then said
"Sir, there is no lady" I freaked out.
"Where'd she go" I asked.
"There's no lady Sir. You sat alone for half an hour already"
Posted by ရိုးရိုး at Monday, January 06, 20140comments Links to this post
Posted by ရိုးရိုး at Sunday, October 27, 20133comments Links to this post
အရင်တုန်းက အိမ်ကလေးဟာ အရိပ်မရှိတဲ့ နေရာလေးမှာ နေအတော်ပူလွန်းလို့အရိပ်ရအောင် ရသမျှ အပင်တွေ အကုန်စုပြီး အိမ်ပတ်လည် စိုတ်ခဲ့ရတယ်။ အပင်မျိုးစိတ်တွေ ကတော့ အေစုံ။ စွယ်တော်ပင်က တင့်ကားတပ်အပြင် က အပင်ပေါက်လေး ကလေးတွေ ကို သေချာတူးယူ ပြီး ဈေးနောက်ဘက်က စပါးစက်က ထွက်တဲ့ဖွဲပြာ နှင့် သံမြေကိုစပ် ငါးကန် အသွား မြေ နီ လမ်းမှာ နွားတွေပါချပြီး ချောက်နေတဲ့နွားချေးခြောက်နဲ့ ပေါ့။ အရိပ်ရမြန်အောင်လို့စိုက်ကောင်း မစိုက်ကောင်း နားမလည်ဘဲ ဘုရားကြီးနောက် က ကုတ်ကို ပင်ပေါက် တူးယူပြီးစိုက်တာဖြစ်တယ်။ ရေချိုးတဲ့နေရာ အရိပ်အမြန်ရဖို့ ကအဓိကလေ အရိပ်ရပြန်တော့လဲ အပင်က အကြီးမြန်လွန်းအားကြီးတယ်။ ရေတုန်ကင်နားမှာ စွယ်တော်ပင်လေး ဟာချိနှဲ ချိနှဲ ကြီးလာခဲ့တယ်။ အဖွားဆုံးတော့ ဒီအပင်လေး က ခါးကျော်ကျော် ရင်စို့ လောက်အမြင့် သာရှိအုန်းမယ်။ ဆင်လိပ်ပြာကြီး တချို့ နားဖူးတာ ကိုကြည့်တိုင်း ငါ့အဖွား ကို ဇီးကွက်ဖြစ်နေတယ်လို့ ပြောတဲ့ ဘာမှန်းမသိတဲ့ အသက်ကြီါးကြီး cousin ငါ့အဖွားရဲ့ မြေးမ ကို သွားပြီး သတိယ တယ်။ သရက်ပင် တွေကတော့ အစုံဘဲပေါ့။ သူငယ်ချင်း တင့်ကားတပ်ရှေ့ရပ်ကွက်မှာနေတဲ့ သူငယ်ချင်းခြံကကော၊ ဆပ်သွားတောက သူငယ်ချင်း ခြံကကော။ ဆပ်သွားတော ဘုန်းကြီးကျောင်း ရှေ့ မှာပေါက်နေတာ ရော အကုန်အစုံဘဲ။ လယ်မြေ ကျစ်ခဲကို ငါ့ magic နည်း နွားချေ့း၊ဖွဲပြာ၊သံ mix လုပ်ပြီး ဒီအပင်တွေ ပျိုးခဲ့တာ အဲ ဒီတုန်းက သဲဝယ်ဖို့ဈေးသိပ်ကြီးတယ်။ သူငှေးတွေကတော့ ကွန်းဒေါင်းနဲ့တိုက်ပြီးခြံထဲ ဖို့ ကြတာကို။ ပိန်း နှဲ ပင်ကတော့ မျိုးစိတ်မမှန် ပင်မသန် ခဲ့ဘူး ခုတော့ သေပြီထင်ပါရဲ့။ အမြင်ကတ်စရာကောင်းတဲ့အုန်းပင်ကတော့ ငါရှိတုန်း မသီးခဲဖူး ခုတော့သီးလွန်းအားကြီးလို့ငါ့အမ ပေါ်တောင် အသီးပြုတ်ကျတာ ကံကြီးပေလို့အများကြီး အနာတရ မဖြစ်ခဲ့တာ ဘုရားမလို့ ။ ငါရှိတုန်းက အုန်းပင်သန်အောင် ဆားလဲကျွေးခဲ့ပါရဲ့။ ပြာလဲပုံပေးခဲ့ဖူးပါရဲ့ ။ အသီးကိုမစားခဲ့ရဘူး။ လက်ပေါက်ကပ်တာကတော့ ဗူးပင်ဘဲ ငါ့တို့ အဖေ မကြာမကြာစိုက်တာပါ။ အညွန့် တော့ မုန်းအောင် စားရခဲ့ရပါတယ်။ ငါစိုက်တိုင်း အမြစ်မဖောက်နိုင်လို့နည်းနည်းတက်လာ ရင်သေ ကုန်တာဘဲ။ ငါစိုက်တဲ့ နေရာကလဲ အိမ်နောက် ပန်းကန်ဆေးတဲ့ နေရာနားလေ။ အခုရွဲယိုပင်ရှိတဲ့ နေရာ နားမဟုတ်လား။ မြေ သိပ်မသန့် လို့မရှင်ဘူး။ အဖေ စိုက်တဲ့နေရာက အိမ်ရှေ့သပြေပင်စိုက်တဲ့ နေရာနား မို့ မြေကောင်းတယ်။ သရက်သီးတွေစသီး သရက်ဖူးဖူးတော့ပျော်လိုက်ထာ။ အိမ်ပြင်ဆောက်တော့ သရက်ပင်တွေကြားထဲမှာ ယာယီ အမိုးအကာနဲ့ငါတို့ တွေနေတုန်း သူခိုးလာခိုးတယ် ဒန်အိုးဒန်ခွက် ခိုးတာနဲ့ တူပါတယ်။ မမိလိုက်ဘူး။ မမိလိုက်တာဘဲ ကောင်းပါတယ်။ ခေတ်ကြီးရှားပါးတဲ့ အချိန်မှာ သူခိုးလဲ ငါ့ဝမ်းပူစာမနေသာလို့ ဖြစ်မှာပေါ့။ ဘာမှလဲ ပါမသွားဘူးလေ။ win- win situation ပေါ့။ အဲဒီအချိန်က ငါ့ကို မိတ်ဆွေဖွဲ့ ချင်ရင် အပင်မျိုးစေ့ သာပေး ။ အပင်ကောင်းကောင်းလေးသာ ရမယ်ဆိုရင် ဂျီအီး ဆပ်လိုင်းက ငါ့သူငယ်ချင်း အိမ်တောင် နေပူကြီးထဲ သွားတယ် ဆယ်တန်း အောင်စရင်းမထွက် သေးတော့ အားယားနေခဲ့တာလဲပါမယ်။ ခုတော့ ငါ့အရပ်မှာ ဆိုင်ကယ်တွေ ဖွတ်ချက်ဖွတ်ချက် နဲ့ ဆိုဘဲ။ မျက်စေ့ရှေ့ မှာ မွေးတဲ့ ရပ်ကွက်ထဲ ကလေးတွေလဲ လူကြီးတွေဖြစ် လို့ ပေါ့။ တစ်ချိန်က အမြန်ကြီး ပြီး အရိပ်အမြန် ရပါစေလို့တယုတယ ရှင်အောင် စိုက်ခဲ့ရတဲ့အပင် တွေလဲ ခုတော့ အရိပ်များလွန်းအားကြီးလို့မမကြီးရဲ့ဒါးသိုင်းနဲ့ တောင် ရှင်းပစ်လိုက်ရတယ်ဆိုဘဲ။ ရေခဲသေတာထဲက ရေအေးနေမှ ဖြစ်မယ်တဲ့ဒါမှ အိမ်ရှေ့ မှလှုထားတဲ့ရေအိုးဟာအေးပြီး လမ်းသွားတဲ့လူ ရဟန်းတွေ အမောပြေသောက် သုံးလို့ ရမှာတဲ့။ တော်သေးပြီ
Posted by ရိုးရိုး at Sunday, March 24, 20133comments Links to this post
ဒီပြန်ရောက်ပြီး နောက်တစ်နေ့ နား နောက်တစ်ရက် အလုပ်ပြန်ဝင် ကိုယ်မရှိတုန်း အလုပ်မှာမထင်မှတ်တာတွေ ဖြစ် စိတ်မကောင်း ဝမ်းနည်းစွာ နှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်(လက်အောက်ငယ်သား)ဆိုမလား တစ်ယောက်ရဲ့ မရိုးသားမှု့ ကို CCTV ပုံရိပ်အရ eye သက်သေလုပ်ခဲ့ရ လူစားထိုး မရခင် အတော်ပင်ပန်း။ နောက်တစ်ယောက် ကို အလုပ်ခန့်တော့ သင်ပေးရတာ စိတ်အရမ်းမော စိတ်ကို အတော်ချုပ်တည်း။ အသက် ရ လာပြီဆိုပေမဲ့ သည်းခံစိတ်ကို မနည်းမွေးယူရ။ အရှိအရှိ အတိုင်း ပြောရင် လူမုန်းခံရ စိတ်မရှည် တစ်ဦး နှင့်တစ်ဦး လေ့လာမှု မှတ်သားနိုင်မှု အတော်ကွာတာ သတိထားမိ။ မညူစူ ဖြစ်အောင်မနည်းသတိထား စိတ် စိတ် အတော်ကို အကုသိုလ်များတဲ့ စိတ် အိမ်က ပါလာတဲ့ အစားလေး တွေ ညတိုင်း ထုတ်စား။ ရောက်ကတည်းက အခြောက်အခြမ်း လေးတွေနဲ့မာလာ သုတ် တွေထုတ်ပြီးတော့စား။ မာလာ ဟင်းဆိုတာ အတော်ဆန်း ။ အနှစ်က အတော်ကောင်း ဆားတော့များတယ် ဘာနဲ့ လုပ်ထားမှန်းမသိ။ နှမ်း ထောင်းလဲပါသလိုဘဲ။ ငြုပ်သီး အနှစ်လဲပါတယ်။ ပဲဆီလား နှမ်းဆီလားမသိ မွေးတာတော့မွေး သည်။ အထဲက အမဲရောင်နဲ့ အဖြူရောင် ခေါက်ဆွဲတွေက အရမ်းတာမယ်။ မာမာကြီးလဲ ဝါးစားပြစ်တာဘဲ နူးအောင်ပြုတ်ဖို့ လိုမှန်းမသိ။ ဗိုက်ဆာရင် ကျောက်ခဲတောင် အစာကြေ နိုင်တာကို။ အရင်က တော့ တစ်ခါစားဖူး။ မသိတော့ ဟင်းချိုထင်ပြီး ရေအများကြီးထည့်စားတော့ မကောင်းဘူးပေါ့။ ဒီပြန်ရောက်တော့ အချို မှုန့် နဲ့ ပြန်ညား။ ဟိုမှာ အတော်လေး ကျန်းကျန်းမာမာ နေခဲ့ရတာဘဲ။ လမ်းလဲလျှောက်လို့ ရတယ်။ ချွေးလဲထွက်တယ်။ အစားတွေလဲ အများကြီးကောင်းတယ်။ အခုကျတော့ အအေးလှိုင်းမိနေ လူလဲ ကျုံဝင်မတတ်အေး။ မနက် ၆နာရီခွဲကျော် အိမ်ကထွက် အလုပ်သွား။ အလုပ်က ၁၄ နာရီ ကွန်ပျူတာရှေ့ ထိုင်နေရတဲ့ အလုပ် ထိုင်ရလွန်းလို့ဂျွတ်တက်နိုင်တယ်။ ထိုင်နေပေမဲ့မျက်စေ့ နား လက် သတိအမြဲထားနေရတဲ့ အ လုပ်။ ငွေတွေ တော်တော်များများကိုင်ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ပိုင်ငွေတွေ မဟုတ်။ ည ၁၀ နာရီ ၁၅ မိနစ် အလုပ်ပိတ် အိမ်ကို ၁၁ ခွဲလောက်ရောက် ကြောင်ကို ကြက်သားနွေးကျွေး လူစာ အခြောက်အခြမ်းထုတ်ဖွင့် ထမင်းနွေး ညစာ နည်းနည်းစား ခနနေ အိပ်ရာဝင် မနက် ၆နာရီခွဲပြန်ထ နောက်တစ်နေ့ အလုပ်သွား ပျော်လို့ နေနေသလား မေးရင်တော့ မပျော်ဘူး။ တော်ရာနေရာဆိုတာလဲ တကယ်တော့ adjustment တွေ အများကြီးလုပ်ခဲ့ရတာ။ ဘယ်မှာပျော်သလဲ ဆိုတော့ ဘယ်မှာမှ မပျော်ဘူး လူတိုင်းနဲ့ လဲ ကြာရှည် မတည့်နိုင်ဘူး။ နားသိပ်မကြားချင်ဘူး လူတွေ စကားပြောတာ တိုးနေတယ်လို့ခံစားရတယ်။ နားလေးနေပြီလို့ ထင်တယ်။ သွားကတော့ ပြင်သင့်သလောက် ဟိုမှာပြင်ခဲ့တယ်။ တော်ပါပြီ ဒီကိုယ်ခနာ စက်ယနးနယားကြီး ကို ခုလောက် ချောဆီထည့်ပြီး လည်ပတ်လို့ရနေသေးတာ ကံကောင်း။ ခေါင်းမွှေးဖြူ တာလဲ ကြာပေါ့။ ဒီအသက်နဲ့ ဒီလောက်ကျန်တာ ကံကောင်းလို့ကိုယ်ထက်ငယ်သူတစ်ချို့သေကြပြီ။ မနေ့ က အသိ ဟောင်းတစ်ယောက် ဆုံးတာမြေချ သတင်းကြား မသွားဖြစ် အလုပ်ရှိ သွားလဲ ကိုယ့်ကိုလူတွေ သိမှာမဟုတ် ။ ဒီနေ့ နား။ ခနနေ စားဖို့ အစားရှာထွက် ရမည် ဘာ့ကြောင့်မှန်းမသိ ဘလော့ဂ်ပြန်ရေးချင်စိတ်ဖြစ်။ ချရေး သတ်ပုံကတော့ ဒီတသက် မမှန်တော့ပါဘူး။ မပြင်တော့ဘူး ။
Posted by ရိုးရိုး at Sunday, March 24, 20132comments Links to this post
Doomy Gloomy Weather and Mid live Crisis
by : ရိုးရိုး
Winter is here; the darkness, some sharp frozes, snow fall and minus temperature all are telling you. That is the weather. The weather in here in the United Kingdoms. Like everyone , I have been trying to land my next job without any success. In fact, I am seriously considering about my age. Getting old is no fun at all. As you all know that there are too many things which older people can not able to cope it or handle it . In fact, I do not have enough time to sit in front of computer to brouse vacancy advertisements. Talking myself to every possible solutions that I can think of. I actually seriously considering to quit and not work forawhile. However financial situation will not allowed to do so. My wife who works in the State is ready to accept me. I am sure she would never even crossed her mind. However I can not just dish my two sons,3step children and their education here. . I think both my employer and myself are running out of patience of the situation. Too many responsibilites I can not to bear as the old days. Well do you think my story is mid life crisis ofafamily. I will call this boring life. As Mr Benjamin said, we are stuck. Yeah, we all are
Posted by ရိုးရိုး at Sunday, December 16, 20120comments Links to this post
''My pain may be the reason for somebody's laugh, but my laugh must never be the reason for somebody's pain.'' by: Charlie Chaplin စာမရေး ဖြစ်တာ အတော်လေးကို ကြာခဲ့ ပါပြီ။ စိတ်ထဲမှာ ရေးစရာ လေးတွေ တစ်ချက် တစ်ချက် ပေါ်လာပေမဲ့ ။ ရှားရှား ပါးပါးရတဲ့ နားရက်အချိန်မှာ အဝတ်လျှော်၊ အစားချက် ၊ ကျန်းမာရေး အတွက် လမ်းနည်းနည်းလျှောက် ဒါတွေ နဲ့လပေါင်းများစွာ ရှုပ်နေလို့ဘလော့ဂ် ကို လှည့်မကြည့်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ဘလော့ဂ် ကိုဖွင့်ကြည့်မိတိုင်း guilty ဖြစ်မိပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့် ဖုံမခါမိသလဲ။ ဘာ့ကြောင့် ဒီတိုင်းပြစ်ထား ခဲ့သလဲ ဆိုတာ တွေ ကတော့ reason အမျိုးမျိုး နှင့်ပါ။ အပေါ်က ချာလီချက်ပလင် ပြောတဲ့ စာသားလေး တစ်ခုအကြောင်းလို တိုက်ဆိုင်စွာ ပြောချင်လို့ ပါ။ ငါရဲ့ နာကျင်မှုများ ဟာ တခြားသူတွေ အတွက် ဟာသ ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ ။ ငါရဲ့ရယ်မောခြင်းဟာ သူများတွေ ရဲ့ နာကျင်မှု ဘယ်တော့မှ မဖြစ်စေရဘူးတဲ့။ ချာလီချက်ပလင် ဟာ သူတော်ကောင်း စိတ်ထားနိုင်တဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ သူဟာ လူတွေကို ငပေါကြီးတစ်ယောက်လို ဘောင်းဘီပွပွကြီးဝတ်။ နှတ်ခမ်းမွှေး ကားကားကြီးတပ် ခြေခွင်ခွင်နဲ့ လမ်းလျှောက်ပြီး ဟာသနဲ့ တင်ဆက်တယ်။ လူတွေ ရီကြတယ်။ တပါးသူ တစ်ယောက်ကို အပြုံးတစ်ခု ပွင့်လာဖို့ ဆိုတာ လွယ်တဲ့ မဟုတ်ဘူးနော်။ မွန်းကြပ်နေတဲ့အချိန်ရှားပျါးနေတဲ့ ခုလို ခေတ်ကာလကြီးမှ လူတစ်ယောက်ကို ဟက်ဟက်ပက်ပက် ရီ နိုင်အောင်လုပ်ဖို့ ဆိုတာ ပါရမီ ရှိမှဖြစ်မယ်။ လောဘဒေါသတွေ နဲ့ လောင်မြိုက်ကျင်လည်နေတဲ့ဘဝကြီးမှ လအကြီးကြီးသာတဲ့ နေ့၊ နေလုံးကြီးတဖြေးဖြေးဝင်သွားတဲ့ညနေတို့ ကို မရှုစားဖြစ်ခဲ့ ကြာလှပေါ့။ လပြည့်နေ့ တောင် ဥပုဒ်သီလ စောင့်ရမယ်ဆိုတာ ခေါင်းထဲ မထားနိုင်တဲ့ ဒီဘဝကြီးကို စိတ်ရှုတ်မိနေပြီ။ ဘဝကို ညည်းငွေ့လာ တယ်ဆိုတာ အခုကြုံနေရပါပြီ။ မနက်စောစော ထ၊ ဘူတာရုံပြေး၊ ရထားစီး၊ မြေအောက်ရထားစီး၊ အလုပ်ရောက်၊ သတင်းစာဖတ်၊ သတင်းစာနံရံမှာကတ်၊ ပိုက်ဆံရေတွက်၊ နောက်လူလာ နေရာချ၊ပိုက်ဆံခွဲပေး၊ ဖုန်းဆက်၊ လက်ဘက်ရည်ဖျော်၊ ဘရိတ်တိုင်းဇယားချ၊ နောက်တစ်ပါတ် အချိန်ဇယားဆွဲ။ ပိုက်ဆံနည်းရင် ဘဏ်ကိုပြေး၊တခြား ဌာနတွေကနေချေး၊ ည အလုပ်သိမ်းချိန်ရောက် ပိုက်ဆံရေ၊ သော့ခတ်၊ဘူတာရုံပြေး၊မြေအောက်ရထားစီး၊မြေပေါ်ရထားစီး၊ အိမ်ရောက်ညစာစား၊တန်းအိပ်၊ မနက်ထ ဘူတာရုံပြေး ဒါဘဲနော် ။ ရထားပေါ်မှာ ဖဲချပ်ဆော့ ၊ ဒါမှမဟုတ် မျက်စေ့ပိတ်ပြီး သီချင်းနားထောင်။ ကိုယ်ဘေးနားမှာ ဘယ်သူတွေ တက်လာသလ။ ဆင်းသွားသလဲမသိ၊ တခါတခါ အိပ်ပျော်ပြီး ဘူတာကြော်စီး ။ ကိုင်းဘဝ ဘာများထူးဆန်းသလဲ။ တခါတခါ ဘုရားတစ်ခုခုဘေးမှာ ငြိမ်ငြိမ်လေးထ်ုင်ပြီး ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ စိတ်ကို ရှုမှတ်ချင်လာတယ်။ ဘာသာတရားလုပ်ချင်လာတယ်။ မနေ့ က ကဆုန်လပြည့်နေ့လပြည့်တယ်ဆိုတာ ကိုတောင် သတိမထားနိုင်တဲ့ ဘုရားစူး ဗုဒ္ဓဘာသာ စစ်စစ်ပါ။
Posted by ရိုးရိုး at Sunday, May 06, 20125comments Links to this post
မနှစ် က နွေရာသီမှာ သူတို့Gypsy ၂ ကောင် အိမ်နောက် မီးဖိုချောင် တံခါးမှာ အစာလာ စားကြတယ်။
အပေါ်က Ginger guy ကတော့ နည်းနည်းဝ ပြီး အောက်ပုံက မောင်ကျားနဲ့မတည့်ဘူး။ သူတို့ ၂ကောင်လုံး လေလွင့် ကြောင် တွေဖြစ်လု့ိ လူတွေနဲ့ သိပ်မယဉ်ကြဘူး ။ ဒီလိုနဲ့...........
နည်းနည်း ပိန်တဲ့ မောင်ကျားဟာ အိမ်ထဲကို ဝင်ခွင့်ထွက် ခွင့်ပါမစ်အပြင် အိမ်ထဲက ဖိနပ်ချွတ်တဲ့ နေရာနဲ့မနီးမဝေးမှာ အိပ်စရာနေရာလေးတစ်ခု ရလာတယ်။
ကြောင်ရည်နည်းနည်း ပိုလည်တဲ့ မောင်ကျားဟာ အိမ်ခံကြောင် ၂ကောင်နဲ့ တည့်တော့ သူလာတိုင်း အိမ်တံခါးဖွင့်ပေး အစာကြွေး အိပ်စရာနေရာပေး အပြင်ထွက်ချင်ရင်ပေးထွက် နဲ့သူ့ အတွက် အလုပ်တစ်ခု ရလာခဲ့တယ်။ သို့ သော် အရိုင်းတို့ ထုံးစံအတိုင်း တစ်ခါတစ်လေ လူကို ကုတ်ချင်တယ်။ လန့် ရင် self defence လိုမျိုးပေါ့။ သို့ သော် တစ်နေ့ မှာ ပျောက်ချင်းမလှပျောက်သွားပါတယ်။
နည်းနည်းပိုစွာတဲ့မိုက်တီး Ginger boy ဟာ တစ်နေ့ တော့ အစာစားပြီး မပြန်တော့ ဘူး။ အိမ်နောက်နားမှာ ရစ်သီရစ်သီနဲ့မီးဖိုတံခါးဖွင့်တိုင်းတွေ့နေရတယ်။ နည်းနည်းရိုင်းတော့ အိမ်ထဲ မဝင်ပါဘူး။ အစာစားနေတုန်းတောင် သူ့ နောက်ကျောကို သပ်ရင် ပြန်ပြီး ခွီးဆိုလုပ်ချင်တယ်။ အိမ်က လူတွေက သူနေစရာ အိမ်လေးတစ်ခု ဆောက်ပေးလိုက်တယ်။ အိမ်နောက် တံစက်မိတ်လှေကားနားမှာ မပြန်တော့ဘူး။ အဲဒီမှာနေတယ်။
ရန်စွာကောင် ဟာ တစ်ဖြေးဖြေး အစားတောင်းတတ်လာတယ်။ မီးဖိုထဲမှာ ထမင်းစားရင် ခြေထောက် ကိုလာလာပွတ်တယ်။ Iceland ကချက်ပြီးသား ကြက်သားထုတ်လေးကို နွေးကျွေးရင် သိပ်ကြိုက်တယ်။ ဒါနတစ်ခု ပြုတာမျိုးဖြစ်လို့သူကြိုက်တတ်တာလေး မပြတ်အောင် ဝယ်ထားဖြစ်တယ်။
ည အလုပ်က အပြန်ထမင်းနွေးရင် ဒီကောင့်အတွက် ကြက်သားတုံးလေးတွေ လဲ သီးသန့် နွေးဖြစ်တယ်။ လူအစာစားရင် သူလဲစားချင်တယ်။ ကြည့်ရတာ အနီးနားက ဘီယာဆိုင်တွေမှာ အမြည်း တောင်းစားနေကြ ကောင် ဖြစ်မယ်။
ဒီလိုန့ဲ သူမပြန်တော့ဘူး။ ဒါပေမဲ့အပြင်ခနခနထွက်ပြီး လမ်းရှာတယ်။ အိမ်ပြန်လာရင် တစ်ခါတစ်ခါ လှေခါးထပ်ကနေ ထွက်ကြိုတတ်တယ်။ အိမ်မှာ ရှိတဲ့အိမ်ကြောင် ၂ကောင် ကို ကိုင်ရင် မနာလိုတတ် သိသိ သာသာ ရှောင်ဖယ် ရှောင်ဖယ် စောင်းငန်း စောင်းငန်း လုပ်တတ် လာတယ်။
တရုတ်နှစ်ကူး မတိုင်ခင်မှာ Taddy Bear အကြီးကြီးတစ်ကောင် အလုပ်ကနေ လက်ဆောင်ရထာ တယ် မြေအောက်ရထား တဆင့် နဲ့ မြေပေါ်ရထား ပါစီးပြီး သယ် ရတာ ရှက်ပေမဲ့ ဒီကောင်များ ကြိုက်မလား လို့သူများတွေ ပြုံးစိစိ လုပ်တာ ကို မျက်နှာလွှဲပြီး သယ်လာခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကြိုက်ပုံမပေါ်ဘူး။ မနေ့ ကတော့ အရုပ်ကို နည်းနည်းယဉ်သွားလို့ ထင်တယ်။ တစ်ရှုံရှုံ နမ်းကြည့်တယ်။ အိမ်က ကောင်တွေနဲ့တော့ သူက ခပ်တန်းတန်းနေတယ် ။ ကိုယ့် အထာနဲ့ ကိုယ် ပေါ့။
အိမ်ခံ မဟုတ်ပေမဲ့နောက်မှ ပေါက်တဲ့Ginger boy ကို အိမ်ကလူတွေ က ခင်ကြတယ်။ သူ့ ဧရိယာ ကျော်လာရင်တော့ လက်ခံမှာ မဟုတ်ဘူးနော်။ အခုဆိုရင် ကျောကုန်း ကိုင်ရင် မေးစေ့ပွတ်ရင် လက်ခံတယ်။ အခု တော်တော်ယဉ်ကျေးလာပြီး ချစ်စရာကောင်းလာတယ်။
Posted by ရိုးရိုး at Wednesday, February 15, 20125comments Links to this post
ယူကျူ့ မှာမြင်ခဲ့တဲ့ ဗွီဒီယိုလေးပါ။
အပေါ်က ဗွီဒီယိုကတော့ မူရင်းအဆိုတော်ရဲ့Art creation ပါ ပြီး အခု အောက် က ဗွီဒီယိုကတော့ လူငါးယောက် က ဂီတာ တလက်တည်းကို တီးခတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဗွီဒီယို ၂ခုလုံးကိုယှဉ် ကြည့်လိုက်တော့ ၂ လုံးကောင်းနေလို့၂ခု လုံးတင်လိုက်ပါတယ်။
စာဖတ်သူတို့လဲကြိုက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
စာသားလေးတွေ ကတွေက တော့ ဒီလိုပါ။
But had me believin it was always something that I'd don’t
Guess that I don't need that thoughNow you're just somebody that I used to know
Somebody that I used to knowSomebody (now your just somebody that I used to know)
That I used to knowSomebody that I used to knowSomebody (somebody)that I used to know
Posted by ရိုးရိုး at Tuesday, February 07, 20122comments Links to this post
မင်္ဂလာရှိသော ဒီနေ့ 
ဒီနေ့ ဟာ မင်္ဂလာရှိသော နေ့ တစ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။
နေရောင်ခြည်တွေ ဟာ နွေးနေပြီး။
အချုပ်အနှောင်ခံနေရတဲ့ငှက်ကလေးတွေ ဟာ သူတို့ ကျင်လည်ကျက်စားရာ မိုးကောင်းကင်ပေါ် ကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပျံသန်းနိုင်တဲ့နေ့ လဲဖြစ်ပါတယ်။
အနာဂတ်ရောင်ခြည် လင်းလက်လာတဲ့နေ့ ဖြစ်ပြီး လူတိုင်းရဲ့ ရင်ထဲမှာ လွတ်လပ်ခြင်း၊ မျှော်လင့်ခြင်း၊ တွေ အပြည့်နဲ့အနာဂါတ်ကို ရင်ဆိုင်ဖို့ခွန်အားတွေ ပြည့်လာတဲ့နေ့ တစ်နေ့ ဖြစ်ပါတယ်။
ရွှေ မြန်မာပြည် ရေ မင်္ဂလာပါ။
Posted by ရိုးရိုး at Friday, January 13, 20123comments Links to this post
India Talent Show ပြိုင်ပွဲမှာ ဝင်ပြိုင်တဲ့ Warriors of Goja ဆိုတဲ့ အဖွဲ့ ရဲ့တင်ဆက်မှုပါ ။ Talent လို့ ပဲ ပြောရမလား ၊ မိုက်ရူးရဲတယ် လို့ ပဲ ပြောရမလားတောင် မသိတော့ဘူး ။
"သွေးသံရဲရဲ မကြည့်ရဲ သူများ မကြည့်သင့်ပါ"
Posted by ရိုးရိုး at Sunday, November 27, 2011 1 comments Links to this post